RAMAMONJISOA BENJAMIN : TSY MIOVA NY TANJONA, TSY MAINTSY HO TONGA I DADA – MyDago.com aime Madagascar
Isika hoy Andriampilamanana Rostand, tsy mitovy amin-dRajoelina, teny amin’ny kianjan’ny Magro Behoririka androany, ka hafa ny anio ary hafa ny ampitso. Valin-kafatra ho anao Rajoelina, hoy izy dia tsy miova izahay fa rehefa eny dia eny,ary rehefa tsia dia tsia. Miharihary omaly hoy ity olomboantendry avy Ihorombe ity, fa Rajoelina no tsy manaiky ny hiverenan’i Dada eto. Amin’ny anaran’ireto vahoaka ireto, hoy izy dia tsy ekenay sy lavinay marindrano izany filoha Ravalomanana tsy hiverina eto izany. Tsy ekenay sy ireto vahoaka ireto ihany koa izany hevitrao Rajoelina manokana izany, fa raha te hanaporofo izany ianao dia ataovy ny fifidianana. Nanao antso ho an’ny FFKM ihany koa Rostand. Hihaona amin’ny Troika ianareo, noho izany dia matoky anareo izahay. Mahalala ny marina sy ny rariny eto amin’ny firenena ianareo. Omeo ny Troika hoy izy ny marina satria fihavanana, fifamelana no hijoroanareo. Raha izany tsy milatsaka izany hoy izy no terenareo dia alahelon’ny vahoaka an-tapitrisa izany ka tsy hisy filaminana eto. Ny CST Ramamonjisoa Benjamin kosa dia nanambara fa telo taona isika nitolona teto ary ny tanjona dia tsy niova fa ny fiverenan’ny filoha Ravalomanana. Sambany ny tenako hoy izy naheno an-dRajoelina nilaza ny marina. Ny tenako hoy Benjamin dia mahita fa nilaza ny marina izy satria tsy miova ny filoha Ravalomanana. Ny vahoaka mihitsy no mitaky ny fiverenany eto. Ny tenako ihany koa hoy izy no miteny fa tsy miova ilay zalahy(Rajoelina) iny satria tsy miova fa mampijaly vahoaka, tsy miova fa te hanitatra ny tetezamita. Nolazaina hoy ity mpanao politika ity, fa manana ny fiandrianany ny firenena, kanefa vao niditra ny frantsay dia niova lay zalahy iny. Tsy mahataitra antsika loatra hoy Benjamin ny olona tahaka ireny fa isika tsy mbola miova ny tanjona dia tsy maintsy tonga i Dada.
Auteur Solo Razafy*Publié le 10 août 2012 10 août 2012 Catégories Politique
20 pensées sur “RAMAMONJISOA BENJAMIN : TSY MIOVA NY TANJONA, TSY MAINTSY HO TONGA I DADA”
TSY MIOVA NY TANJAJONA DIA HOMENA EFA TAONA INDRAY RAJOELINA ,ary asiana Dinika matetika eo isaky ny telo volana eo .
10 août 2012 à 20 h 16 min
Za, aloha tsy kivy Ravelonarivo annnnn, de mampahery anao koa
10 août 2012 à 20 h 30 min
Tsy Kivykanefa dia mitady ny fomba mahery ary mamokatra.
Hono ho aho, Andry Rajoelina nilaza teny Ivato fa hoe, tsy hekeny hitondra Fanjakana intsony hono Ravalomanana; dia lasa ny saiko hoe, f’angaha moa tsy Olona Efa Naloam-bahoaka iny Filoham-pirenena teo aloha iny, araka ny filazany hatramin’izay? Ka inona no hilazany an’izany? Raha naloam-bahoaka izany na hiverina hilatsaka ho fidiana aza ny vahoaka tsy hiverina amin’ny loany izany, ny amboa no miverina amin’ny loany , ka raha tena marina fa naloam-bahoaka marina iny dia aleo hilatsaka eo, fa sady ho lany vola fotsiny no ho afa-baraka satria tsy ho averin’ny vahoaka eo intsony. Ary tsy tokony hisy hatahoran’i Andry Rajoelina akory na dia kely aza ny hifaninana aminy amin’izany fifidianana izany fa izay olona efa naloam-bahoaka ve. (sa ny mifanohitra amin’izay no tena izy ka mahatonga io fanakanana azy io mafy dia mafy tsy hody ary tsy hilatsaka ho fidiana sao tratra eo indray ny lainga sy fitaka nitarihana olona hanohana ny tena ka nilazana izany hoe « naloam-bahoaka izany »
F´angaha an´i Andry rajoelina i Madagasikara, f´angaha azy io fanjakana io, f´angaha dia ho poretiny hatrami´ny farany ny vahoaka .
fa raha azoko ny tiany ho lazaina : dia ho vonoiny izany i PSDt Marc Ravalomanana. tahaka ny hoe. Tsy avelako ho velona eo iiny, satria manko raha miverina ny filoha ravalomanana Marc tsy maintsy lany.
Mailo isika fa efa mano menace i Rajoelina fa hamono izy, izay no dikan´ny vavany.
ary matahotra mafy i domelina ,inona nohatahorany mahabe vava azy taatao. Efa akaiky angaha ny farany . Hi! hi! Hi!.
arovintsika i dada fa hampiasa vola i Andry rajoelina hampamono azy. olona efa devoly mpamono olona lian-drá tahaka io. mpamosavy mody malemy i rajoelina fa mpamono olona gaigy lahy
Asa aloha e! izay izany !!an-dray sy reniny i Dago ka izany no hanjakazakany.
hanalany ny fony toy izao.Iza no hiaro an’i dada eo e! jereo ary i Neny ireny iza no mba
nitsangana niaro azy teo???voan’ny raikiraiky daholo!!
10 août 2012 à 22 h 13 min
Raha azoko dia efa tahaka ny tapan-doha i andry rajoelina ka mimenomenona tahaka ny loha tapaka.
» Izay mangina volamena DADA a! » Aminay dia efa Mpandresy ianao ary efa nandresy »
vavan´ny resy ny tahaka ny an´i andry rajoelina, vavanólona tapin-dala-kaleha, vavan´ny tahotra fa hifototra ny zavatra natao rehetra
10 août 2012 à 22 h 28 min
O ry Andry tena domelina a ! Potika, maimbo tsy misy ilana azy intsony ny tanàna. Izao ve no ireharehanareo fa hoe mafy sy mahay mitondra ianareo ?
Afabaraka ny tanindrazana ipipizan’ny tsy valahara
Dia ny taigna ro megnatsa
Megnatsa tanteraka tokoa ny taigna e!
Fa tsy vao izao i domelina no manipy teny momba « mety hampamonoina ny fahavalony tsy mety lefy na mamoka hevidratsy foana aza ny sefo frantsay ».
Efa fanahon’ny frantsay anie ny mampamono izay be dohika mitsangana hanohitra andry zareo e!
– malagasy ihany no mety harosondry zareo hanao izany na « tireur d’élite frantsay ». Ireo frantsay mody « touriste » na tompon’orinasa na « instructuer/militaire na gendarme » dia efa ela no an-toerana e!
** midongy ny fampodina ny filoha isika dia tsy hisalasala ny frantsay rehefa tapi-dalana satria ho avadiky ry zareo ny resaka hoe « réglement de compte malgacho-malgache »
** dia ry zareo ihany no voalohany hanameloka ny tranga ARY hanolotra fanampiana ho any vahoaka malagasy!!!
Efa impiry moa no naveriko teto ireo satria efa fomba fiasandry zareo nandaitra tany an-kafà dia azo tohizana, indrindra ny malagasy tsy hisy hihetsika toa ny afrikana na arabo!
Rehefa tsy mbola hanapaka tadi-poitra @ renin-dozatra (malala ho any domelina), dia ny eo ihany no miverina ….dia mitohy foan koa ny vavaka…
11 août 2012 à 9 h 30 min
hiiiiiiiii!!!iny indray no tsy hitako ilay hoe: « tsy tapaka tadi-poitra »
Tena latsaka aho marina!!!
Ny mpitarika ihany no herany e!!na hiatsika na tsy hietsika.
11 août 2012 à 17 h 24 min
Dia hiandry izay tsy afaka eto foana ve izany? tsy azoko!, aleoko mangina fa mety amintsika izany izao e, aza mitaraina, aza mimenomenona fa miandrasa eo mandrakizay.Andraso Rajoelina hiala amin’ny sitrapony, andraso « Franceman » hanala anao amizao fahoriana izao, andraso, andraso………. aza mihetsika mihitsy fa andraso…. ny mana avy any an-danitra
11 août 2012 à 20 h 33 min
Inona ary no atao? higidragidra ve? hanimba ny tanàna; azo antoka hamerina an’i Dada ve izay? sa hitady hevitra hanery ny iraisam-pirenena mba hanery an’drajoelina hanaiky, sa inona eh? ny tsara aloha dia samy tsy kivy, ka afaka mifanankalo hevitra hitadiavana izay mety hatao. Inona ary ilay ho atao, sa raha mahita hevitra hafa mihitsy koa,…..
12 août 2012 à 0 h 29 min
I Andry tena Domeilina iany no RABE, manao ambony ambany !!!
Efa hoe maimbo sy massisso ny tanàna kou mbola be kabary iany. Marina mahintsy ny tenin’i Tatsimo araka ny vaovao azo avy any.
Ny Gasy any ivelany hono menatra ka tsy miteny hoe gasy na efa zato taona no tsy tany @ tanàna fa opain’ny zanak’i renimalala ny tanindrazana hoe « c’est sale, c’est pauvre, les rues de la capitale sont devenues impraticables » et patati et patata !
Asainy mamafa ny baotiny fotsiny ry RABE sy ny tariny dia avy eo traiter-ny de tous les noms. Tsy manan-kambo, tsy menatra, mpivarotra tanindrazana ary ahiako hivarotra ny reniny sy ny anabaviny atsy ho atsy noho ny filelafany ny v….n’ny menasofina.
Tsy ho vazaha na oviana na oviana ianareo ry RABE sy ny tariny a raha mbola tany koa ny tany fa aza be horakoraka toa ny sahona fa ny TSIBOBOKA iany no tompon’ny rano.
Na nomen’i renimalala taratasy aza ianareo tsy hiova fotsy ny hoditrareo maintikely ary ny masonareo tsy hanjary mangabe na oviana aman-tany fa mba mihevera iany lahy sao dia any aoriana vao hoe « si je savaissssssssssssss » !!!
(Coucou Ranavalona sy ny tary rehetra)
12 août 2012 à 8 h 09 min
E ! E ! E !
Maloto, maimbo, masssisssou ny tanàna !
Mazavabe Nanahary fa DJ no misoloky ho Prezidà !!! Mifitra @ hazo tsy omby vody !
12 août 2012 à 14 h 22 min
Misy manontany etsy ambony hoe inona no atao?Ahoana raha manontany an’y prezida Zuma ny hanoloana mihintsy an’i Domelina mba ho olona hafa no atao prezidan’ny tetezamita satria i Doma tsy manaraka ny tondrozotra intsony.Ahoana ny hevintsika rehetra?
12 août 2012 à 14 h 36 min
Hadinon’i sė ilay orona petaka!!eto ihany e!!miandry anareo eto ry Baby a!!!
Izay mba akaiky an’i dada angamba no tokony hanamafy io torohevitra io ry Andriandahifotsy.
12 août 2012 à 20 h 14 min
Mbola nitady vaovao momba ny tanàna oà ny aty fa tsy misy miala eto zany raha tsy miala io mpifitra @ hazo tsy omby v…. io.
14 août 2012 à 14 h 33 min
izay izany no naha pelaka azy fa hazo no fifitrany???( petederire)
sė no nampianatra ahy an’io an!!
J.Zuma sy SADC ahina toa tsy afa-manohitra firy intsony ry Andriandahifotsy an!
Jereo fa napitika tany Seychelles ny fihaonana, dia ity « france-ment » (fransman, sudaf iray indray voavidiny frantsay), ary efa voalamina koa ny Cenit/élections, dia rehefa tsy hisy hetsika avy @ mpitolona manohina ny filoha M.Ravalomanana , dia araky nolazain’i Hery teo aloha hoe, « échec et mat » ary hampiko hoe loza fa tsy nisy « roc » akory! Sa misy fika mandady any ho any e?
Sao re mbola misy azo atao ihany ankoatry ny resaka eto e!Isika anie tsy manana afa tsy ny filoha M.Ravalomanana irery ka aleo mifanampy e!
14 août 2012 à 19 h 41 min
Randry!Tsy ny toerana hanaovana fihaonana no inona ary matoa i Ravalomanana mbola afaka mipetraka ao Afrika atsimo dia noho i Jacob Zuma.Matoa mikaon-doha lava amin’ny fihaonana sy ny SOMMET ny SADC dia mitady ny hamahana ny olana izy.Afaka natao anie hoe: isaky ny telo volana ry zareo no manokatra an’i Dossier Dago io kanefa amin’ny 17 sy 18 izao dia hisy fivoriana izay handinihana ny momban’i Madagasikara.Satria tsy Dago irery ny olana mipetraka eo anivon’ny SADC fa Zimbabwe sy DRC ary hafa koa angamba dia miasa ry zareo hoan’ireo firenena ireo.Ary matoa Ravalomanana voaasa amin’io fivoriana any Maputo io dia mbola manana ny hajany izy izany eo anivon’ny SADC.
Efa namoaka soso-kevitra ihany ny tenanay ao amin’ny lafy8@forumactif.ca ka sao dia azonareo ampiana e!
Ny zavatra azo atao koa dia satria ny vola azo amin’ny bois de rose no hamalifaliana ny milisy (fa tsy miaramila) dia ireo no miaro an’i Domelina.Dia tokony ho any amin’ireny toerana ireny hanabe ny mponina any momba ny tontolo iainana mba tsy hikarama amin’ny fibatana sy ny fanapotehana ny andramena.Na koa ireny no andefasana sakafo haingana.
Précédent Article précédent : AZO ANTOKA FA NY FILOHA RAVALOMANANA NO MAHAZAKA VAHOAKA
Suivant Article suivant : TSY MIANTEHITRA AMIN’NY HAZO BOBOKA ISIKA FA AMIN’NY HAZO MATANJAKA